Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK o xaflad soo dhaweyn ah u qabtey Madaxweynaha Soomaaliya (Sawiro + Video) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK o xaflad soo dhaweyn ah u qabtey Madaxweynaha Soomaaliya (Sawiro + Video)
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK o xaflad soo dhaweyn ah u qabtey Madaxweynaha Soomaaliya (Sawiro + Video)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xassan Shiikh Maxamuud iyo Marwada kowaad Qamar Cali Cumar iyo wefdi ka socda Dowladda Fedraalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingriiska.
Xubnaha ku weheliyey kulanka ballaran ee xalay ka dhacay magaalada London waxaa kamid aha Raysalwasare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibadda Marwo Fawsiya Yusuf Xaaji Adam, Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Faarax Shiikh Cabdulqaadir, iyo saraakiil kale oo ka socotey madaxtooyada Soomaaliya.
Amaanka ayaa ahaa mid si weyn loo adkeeyey waxaana sugaayey ciidamo dharcad ah iyo kuwo Boolis ee magaalada London.
Furitaankii xafladda soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya waxaa magaca Jaaliyadda Ingriiska waxaa ku hadley Mudane Cabdi Cumar, waxaana uu ku dheeraadey xafladda ballaran iyo qaabkii loo soo agaasimey iyo sida ay Madaxweynaha ugu soo dhaweynayaan dalka Ingriiska, sidoo kale waxaa xafladda ka hadley Siyaasi hore isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtey Soomaaliya Cismaan Jaamac Cali (Kaluun), Cismaan Kalluun ayaa hadalkiisa ku soo qaatey in Soomaalidu wixii kala gaarey ay meel iska dhigaan isla markaana mustaqbalkooda dhistaan.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyn tacsi u direy Suldaan Cabdi Suldaan Cali o maalintii Sabtida lagu aaskey Kismaayo waxa uu sheegay in uu ahaa Salaadiintii wax ka soo dhisey dowladda.
Madaxweynaha oo qudbad ka jeediyay halkaas ayaa wuxuu kaga hadlay, qorshaha dowladda ay ka damacsantahay,amniga. Wuxuuna kaga digay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingriiska in ay ka fogaadaan qabyaaladda. “ Qaran in la dhiso iyo in qabyaallad laga shaqeeyo meel is lama gasho” wuxuuna Madaxweynaha ku booriyay Jaaliyadda in ay ka qeyb qaatan dib u dhiska dalka.
Madaxweynaha, ayaan wax cusub oo aan horey loo maqal sheegin waxaana uu jaaliyadda warbixin ka siiyay xaaladda uu hadda dalka ku sugan yahay iyo istaraatijiyadda Lixda Tiir siyasadeed. Waxaa kale uu ka hadlay safarkiisii uu ku gaaray dalka Maraykanka, kaasna ku tilmaamay mid guul ku soo dhamaaday.
Ugu danbeyntii ayuu Madaxweynaha kula dar-daarmay Jaaliyadda in ay dhowraan sharciyadda iyo nidaamka u degsan dalka ay ku nool yihiin, ayna masuuliyad iska saaran xoojinta arinkaas.
Madaxweynaha ayaa kulamda uu la yeelan doono Madaxda UK ay u bilaaban doonta maalinta berri ah, waxaana lagu wadaa in booqashadiisa UK ay soo dhamaato malmaha soo socda.